Dhageyso: Gaas oo ka hadlay sida uu u arko wasiirada cusub ee DF - Caasimada Online
Home Warar Dhageyso: Gaas oo ka hadlay sida uu u arko wasiirada cusub ee...
Dhageyso: Gaas oo ka hadlay sida uu u arko wasiirada cusub ee DF
Garoowe (Caasimada Online) – Madaxweynaha Maamulka Puntland Cabdiweli gaas oo dib ugu soo laabtay Garoowe ayaa maanta saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha ee Magaalada.
Madaxweynaha Puntland Gas ayaa ka hadla safaradii uu ku tagay Itoobiya iyo Imaaraadka Carabta, wuxuuna sheegay inuu abaal weyn u hayaan Imaaraadka Carabta isagaa ka dhawaajiyey inay ka caawisay ciidamada Badda Puntland isla markaasna ay gacan ka geysteen sidii loo soo deyn lahaa markabkii dhawaan lagu qabsaday dhulka uu ka arrimiyo maamulkaas.
Madaxweynaha ayaa sheegay inuu Itoobiya iyo Imaaraadka u tagay arrimo ku aadan mashaariic laga fulin doono dhulka uu ka arrimiyo maamulka Puntland .
Gaas ayaa la waydiiyey sida uu u arko xukuumadda cusub ee uu Shalay ku dhawaaqay Ra’isulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Wuxuu sheegay inuu aad usoo dhaweynayo xukuumdda cusub ee la dhisay isla markaasna uu si dhaw ula shaqeyn doono, wuxuu kaloo sheegay inay sugayaan khereka ka imaan doono xukuumadda cusub.
Haddaba halkaan hoose ka dhageyso hadalka Cabdiweli Gaas oo ka hadlay arrimo dhawr, wuxuuna xukuumadda cusub uga hadli doono gebagabada shirkiisa Jaraa’id, markaas oo ay saxaafadda wax ka waydiin doonto sida uu u arko.